Wararka Suuqa Kala iibsiga Maanta: Van de Beek, Ruiz, Bowen, Cantwell, Milenkovic, Arthur, Broja | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Wararka Suuqa Kala iibsiga Maanta: Van de Beek, Ruiz, Bowen, Cantwell, Milenkovic,...
Wararka Suuqa Kala iibsiga Maanta: Van de Beek, Ruiz, Bowen, Cantwell, Milenkovic, Arthur, Broja
Manchester United ayaa u soo bandhigtay Newcastle United iyo Borussia Dortmund ciyaaryahanka khadka dhexe ee Netherlands Donny van de Beek, oo 24 jir ah . (Manchester Evening News)
Manchester United ayaa meel wanaagsan u mareysa saxiixa 25 jirka qadka dhexe ee Napoli iyo Spain Fabian Ruiz. (La Republica)
Manchester United ayaa sii wada in ay la xiriirto tababaraha kooxda Paris St-Germain ee Mauricio Pochettino iyaga oo kala hadlaya doorka tababaraha. (Le Parisien)
25 jirka weerarka uga ciyaara West Ham Jarrod Bowen ayaa isha ku haya inuu u dhaqaaqo Liverpool , kaasoo weli xiiseynaya inuu u dhaqaaqo xagaaga. (FootballInsider)
Newcastle ayaa dalab ka gudbisay 28-jirka Sevilla iyo Brazil daafaca Diego Carlos. (Sky Sports)
Newcastle ayaa loo sheegay inay bixiso wax ka badan 37 milyan ginni si ay ula soo saxiixdaan 24 jirka daafaca uga ciyaara Fiorentina Nikola Milenkovic. (Thesun)
Lille ayaa u sheegtay Newcastle in daafaca reer Holland ee Sven Botman, oo 22 jir ah, uusan iib ahayn, inkastoo kooxuhu weli ay la xiriiraan. (Dailymail)
Tottenham ayaa isha ku haysa in ay ka iibiso xiddiga khadka dhexe ee France Tanguy Ndombele oo 25 jir ah koox Talyaani ah, iyadoo Juventus ay u badan tahay. (Mirror)
Southampton ayaa rajaynaysa inay heshiis amaah ah ku qaadato 20 jirka weerarka uga ciyaara Albania Armando Broja kana tirsan Chelsea . (Sky Sports)
Borussia Dortmund ayaa xiiseyneysa saxiixa 25 jirka daafaca uga ciyaara Chelsea iyo Denmark Andreas Christensen. (Patrick Berger-Sport1)
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa rajaynaya weeraryahanka Belgium Divock Origi, 26, inuu sii joogo wax ka badan suuqa kala iibsiga ee Janaayo. (Liverpool FC)
Waxaa jirta rajo sii kordheysa ee Liverpool oo ah in u dhaqaaqista xagaagan ee xidiga Borussia Dortmund iyo xulka England Jude Bellingham, oo 18 jir ah, . (CaughOffside)
Arsenal ayaa laga yaabaa inay ka niyad jabto baacsiga ay ugu jirto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Brazil Arthur Melo sababtoo ah Juventus ma rabto 25 sanno jirkaan inuu amaah ku baxo. (DiMarzio)
Arsenal waxa ay haysataa liis todoba ciyaartoy ah oo ay bartilmaameed ka dhiganayaan oo ay ku jiraan ciyaartoyga khadka dhexe ee Youri Tielemans, 24, ka Leicester , Paris St-Germain Georginio Wijnaldum, 31, iyo Lyon Bruno Guimaraes, 24. (Mirror).
Tababaraha Leicester Brendan Rodgers ayaa soo jeediyay inuu qorsheynayo mustaqbalka Uusan ku jirin ciyaaryahanka khadka dhexe ee Belgium Tielemans, kaasoo heshiiskiisu dhacayo xagaaga 2023. (Telegraph)
Leicester ayaa rajeyneysa inay 24 jirka garabka uga ciyaara Ingariiska Ademola Lookman oo amaah uga yimid RB Leipzig inay ka dhigto heshiis joogta ah. (Leicester Mercury)
Chelsea ayaa diyaar u ah inay dalab qandaraas kordhin ah ka gudbiso 28 jirka daafaca uga ciyaara Jarmalka ee Antonio Rudiger, kaasoo qandaraaskiisu uu dhacayo xagaaga. (Mirror)
Daafaca midig ee Manchester United iyo Portugal Diogo Dalot, oo 22 jir ah, ayaa ku jira liiska Atletico Madrid si uu u buuxiyo booska Kieran Trippier ka dib markii uu 31-sano jir daafaca England u dhaqaaqay Newcastle. (AS)
Aston Villa ayaa muujisay xiisaha ay u qabto goolhayaha reer Spain ee kooxda Paris St-Germain 28 jirka Sergio Rico. (Express)
Aston Villa ayaa isku dayaysa inay soo gabagabayso u dhaqaaqista 17 jirka daafaca uga ciyaara Scotland ee Kerr Smith kana tirsan Dundee United. (Dailymail)
Watford, Southampton iyo Norwich ayaa isha ku haya 19 jirka garabka uga ciyaara Lewes Ollie Tanner. (Sun)
Burnley ayaa kooxaha Nottingham Forest iyo Coventry kula tartamaya 27 jirka daafaca uga ciyaara Birmingham ee Kristian Pedersen. (FootballInsider)
Manchester City ayaa xiiseyneysa 17-jirka khadka dhexe ee Brazil Matheus Franca. (BolaVip )
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Muqdisho (Caasimada Online) – Ciidamada Booliska Soomaaliya iyo koox hubeysan oo burcad ah ayaa xalay ku dagaalamay Waaxda Jenaraal Daa’uud oo ka tirsan degmada...
Sawirro: Halkuu maraya dhismaha xarunta xukuumadda iyo xafiiska ra’iisul wasaaraha?
Rooble oo Ka hadlay Kiiska Ikraan Tahliil, Guuldarada Qoor qoor Iyo...